Mushure meChibvumirano: Mabatiro EVatengi neMutengi Wekubudirira Maitiro | Martech Zone
Mushure meChibvumirano: Mabatiro eVatengi neMutengi Wekubudirira Maitiro
China, Kurume 31, 2022 China, Kurume 31, 2022 George Rowlands
Iwe uri mutengesi, unoita zvekutengesa. Iwe ndivo kutengesa.
Uye ndizvo chete, iwe unofunga kuti basa rako raitwa uye unoenda kune rinotevera. Vamwe vatengesi havazivi nguva yekurega kutengesa uye kuti votanga rinhi kutarisira kutengesa kwavanenge vatoita.
Chokwadi ndechekuti, mushure mekutengesa hukama hwevatengi hwakangokosha sehukama hwepresale. Pane akati wandei maitiro bhizinesi rako raunogona kuita kuti riite zvirinani hukama hwaro hwekutengesa-vatengi.
Pamwe chete, maitiro aya anonzi Customer Success Strategy uye akagadzirirwa kubatsira bhizinesi rako pamativi akasiyana.
Kudzoka pane investimenti (Royi): Mutengi wega wega anochengetwa mutengi mudiki anoda kuwanikwa kuti asangane nemari inotarirwa.
Wongororo dziri nani: Brand evangelism uye wongororo pamasaiti akadai Capterra uye G2 kunatsiridza brand image uye kuunza vatengi vakawanda.
Dzimwe mhinduro: Hazvifanirwe kuvhiringwa neongororo, mhinduro iruzivo rwemukati rwunogona kushandiswa kugadzirisa chigadzirwa chako.
Zvinonzwika zvakanaka, asi tinozviita sei?
Kana mhinduro pfupi iri yakaitwa zvakanaka, yakazara-inosanganisa Mutengi Wekubudirira Strategy, mhinduro refu iri muchinyorwa chino.
Inotsanangura mbiru ina dzeKubudirira kweMutengi uye maitiro ekudziisa pamberi-uye-pakati pemaitiro ako ebhizinesi.
Chii chinonzi Customer Success?
A Customer Success strategy inzira inobatika kuhukama hwevatengi.
Customer Relationship Management inosanganisira kutarisira matambudziko angangosangana nemutengi parwendo rwavo nekuziva nekunzwisisa mutengi, zvavanoda, uye indasitiri yavo. Zvinotora kudzidzisana kwechigadzirwa maficha uye mashandisiro, nguva dzose, akawanda-chiteshi kutaurirana, uye yemukati timu kurongeka kuita Kubudirira Kwemutengi.
Saka, unogona kushamisika kuti izvo zvinokwana papi mubhizinesi rako.
Nezviwanikwa zvakakwana, mabhizinesi akakura anokwanisa kushandisa ese ari maviri Tsigiro yeVatengi uye zvikwata zvinobudirira zveVatengi. Nehurombo, havasi vese vanogona kuzvidaidza kuti bhizinesi rakakura… zvakadaro.
Mabhizinesi madiki anogona kusanganisa Zvikwata zveKutengesa uye Tsigiro sechikwata chimwe cheVatengi Vanobudirira. Vanoita izvi nekudzikisira kudiwa kwerutsigiro rwemaoko kuburikidza nekugadzirwa kwezvishandiso zvedzidzo yevatengi vega-sevhisi: Nheyo yeruzivo, nzvimbo yekubatsira zvinyorwa, vhidhiyo tutorials, webinars yenguva dzose, uye kundibvunza-ini-chero zvikamu.
Izvi zvinosunungura Mutengi Akabudirira mumiririri nguva yekuisa pfungwa pakuvaka hukama huri nani hwevatengi, kunzwisisa mabhizinesi evatengi zvirinani, uye kuvabatsira kukura.
MuB2B SaaS indasitiri kunyanya, kubudirira kwebhizinesi rako kunoenderana zvachose nekubudirira kwemutengi wako. Vatengi vanotenga chigadzirwa chako kana sevhisi kuti vavandudze yavo. Kana kuitwa kwesevhisi yako kuchibudirira kwavari, nei vasingazorambe vachizvinyoresa? Kuenderera mberi nekushandira pamwe kunoita kuti matairi ako arambe achirira uye kukura kuchikura.
Kubudirira Kwevatengi kubudirira kwebhizimisi.
Mutengi Wekubudirira Mbiru 1: Proactivity
Proactivity ndiro musimboti weKubudirira kweMutengi.
Proactivity nevatengi varipo kwakakosha. Usamirire kuti mutengi akubate nedambudziko. Seta nguva dzose-yakarongwa runhare rwekuongorora kuti utarise pavari, inzwa ruzivo rwavo rwechigadzirwa chako, uye uone kana ichizadzisa zvavanotarisira pakutanga.
Uyezve, kana zvinhu zvitsva kana zvigadzirwa zvawedzerwa kune yako siyana, taurira pasirese.
Kunyanya zvakanyanya, udza vatengi vari kuda kuwana zvakanyanya kubva kune zvitsva zvekuwedzera. Vakoke kune yakasarudzika demo kufona kana tambira inorarama Bvunza-Ini-Chero chikamu uye varatidze vakatenderedza.
Muchokwadi, Kubudirira kweMutengi kunoshanda zvekuti inotanga kunyangwe mutengi asati ave mutengi.
Onboard sales-akakodzera anotungamira
Sales-vanokwanisa vanotungamira (SQLs) ndeavo vane mikana yepamusoro yekutendeuka.
Pamwe vakatoratidza kufarira zvinhu zvekushambadzira zvechigadzirwa chako, vakabata timu yekutengesa, kana kusaina zvakananga kuyedza mahara. Aya ndiwo maturu anopisa, uye zvakakosha kuti ubatane navo pamaoko kuti uvadzorere mukati vachiri pamutsetse. Pane nzira dzaunogona kuwana zvakanyanya kubva mukusangana uku.
Gadzirisa demo mafoni. Kana iyo inotungamira yakatosaina kuhurongwa uye yatanga kuishandisa, tarisa maficha avakaedza uye kuvaka yako demo kufona zvichibva pazviri.
Ziva mutungamiri usati wafona kekutanga. Tsvaga ruzivo rwakawanda nezvekambani sezvaunokwanisa: Saizi, chimiro chedhipatimendi, indasitiri, zvavakawana munguva pfupi yapfuura, uye matambudziko aripo. Ronga demo kuti riite nemamiriro avo chaiwo.
Bvunza nezve mhedzisiro yavanoda kubva kune yako software uye kuvaka kutaurirana kwako kune izvo zvinangwa. Zvadaro, varatidze nzira ipfupi kune izvo zvinangwa.
Usaratidze zvese zvinoshanda kubva pakuenda-kuenda; zvinogona kuita kuti mutungamiri avhiringidzike. Tanga nezvinhu zvinodiwa chete uye tsanangura zvakawanda sezvavanokura kuva chigadzirwa.
Nguva dzose mutengi kuongorora kufona
Regular ongororo inofona, yenguva iyo vatengi do iva vatengi, inofanirawo kunge iri chikamu cheMutengi Wekubudirira kwako zano.
Ita kuti vatungamiri veVatengi Vanobudirira vaite basa ravo rechikoro, ongorora maakaundi evatengi, uye kuronga kutaurirana navo nguva dzose kuti vanzwisise kufambira mberi kwavo kwekuita uye kuwedzera kushandiswa kwechigadzirwa. Chimiro chakajairwa chenguva dzose chekuongorora mafoni chinogona kutaridzika seizvi…
Yekutanga yekuongorora kufona kwevatengesi-vanokwanisa vanotungamira, sezvakatsanangurwa pamusoro.
Mwedzi mumwe kuita tarisa kumusoro, kuve nechokwadi kuita zvakanaka.
Mwedzi mitanhatu yekuvandudza yekutungamira kune mamwe maficha epamberi.
Ongororo yegore rimwe chete yekumisikidza chero shanduko dzinodiwa usati wanyoresa zvakare.
Nguva yacho inogona kusiyana zvichienderana nechigadzirwa-mhando uye bhizinesi modhi yekambani yako. Chero nzira, zvakakosha kuve nechokwadi chekugara uchitaurirana nemutengi.
Proactivity yeCustomer Success inozvisiyanisa kubva kune yechinyakare Mutengi Tsigiro modhi.
Nekutarisira matambudziko, mibvunzo, uye zvikumbiro, tinogona kuve nechokwadi kuti hazvimbove chikonzero chekuti mutengi aende.
Mutengi Achibudirira Mbiru 2: Dzidzo
Kana proactivity iri ibwe rekona reKubudirira kweVatengi, dzidzo ndiwo madziro mana anochengeta zvese zviri mukati.
Proactivity ndiyo dzidzo yevashandi vako yakatenderedza indasitiri yemutengi uye kushandiswa kwechigadzirwa.
Dzidzo inoreva kupa vatengi kunzwisisa kwakasimba kwemashandisiro akanaka ekushandisa chigadzirwa zvinoenderana nezvavanoda. Vatengi vanoda kusvika parizvino, ruzivo rwenguva chaiyo nezve chigadzirwa kuti vagone kukudziridza yavo yenguva refu zano uye kuyera kukura kwebhizinesi ravo nechigadzirwa chako pamwoyo pacho. Kuti izvi zviitike, zviri mukati ndimambo.
Zviripo ndeye mambo
Kushambadzira muchina, kuburitsa kwakakodzera, kwakakosha zvemukati kune vatengi varipo pamwe neavo vanotarisira.
Kunze kwematsamba enhau uye mu-chigadzirwa zviziviso zveakakosha magadzirirwo uye kuburitswa, mhanyisa mhenyu webinars uye mafambiro ekufamba ayo akawedzerwa kana kuvandudzwa. Chengetedza kuyerera nguva dzose kwezvidzidzo uye pre-boarding zvemukati pawebhusaiti yako, senge madhairekitori, eBooks, cheat sheets, uye chekilist. Enda zvakatopfuura…
Peji yeFAQ yakakamurwa kuita zvikamu zvinoenderana neakasiyana chigadzirwa maficha.
Audio zvemukati senge podcasts zvinopa imwe chiteshi chemukati kubatanidzwa kune vatengi.
Makonferensi uye misangano yezvigadzirwa.
A kudzidza utariri hurongwa (LMS) nemavhidhiyo edzidziso uye zvidzidzo.
Academies uye zvitupa kune avo vanoda kuve vadyidzani kana vatengesi.
Kusaziva mashandisiro echigadzirwa ndicho chimwe chezvikonzero zvakapararira zvevatengi churn. Zvinhu zvakakodzera kudzidzisa vatengi kubvisa chikonzero ichi.
Mutengi Achibudirira Mbiru 3: Kukurukurirana
Kubudirira kweMutengi kana kuti kwete, bhizinesi rako rinofanira kuita kuti kutaurirana kunoshanda kuve pekutanga sezvo richivavarira kusikwa uye kukura.
Kukurukurirana kwevatengi chiitiko (CCE) zvinoreva kupa tsigiro inoenderera uye kutungamira kune vatengi pamunhu. Chinangwa cheCCE ndechekuvhura nzira mbiri dzekutaurirana pakati pemutengi nemhando, pamwero wekuti vatengi vane chivimbo chakakwana kuti vauye kuKubudirira reps nemazano ekuvandudza uye mhinduro yakatendeseka.
Shamwaridzana nevatengi nekutsvaga zvakawanda pamusoro pavo pane basa, kana vachida kugovera.
Rerutsira pahunyanzvi jargon, taura nemutauro unonzwisiswa nevatengi.
Usanyara kubvunza mibvunzo yakawanda. Zvidzidzise iwe nezvebhizinesi ravo.
Ramba kure nezvinyorwa; iva nehurukuro chaiyo inotungamirirwa nezvakaitika. Senyanzvi yeindasitiri, haudi script.
Sangana nevatengi pavanenge vari. Shandisa centralizing tekinoroji senge mutengi hukama manejimendi chikuva (CRM) kuchengetedza mamiriro ese evatengi munzvimbo imwechete, zvisinei kuti yakabva kupi.
Uyezve, kutaurirana kunoshanda kunoreva kumisa nharaunda yakatenderedza brand yako.
Nharaunda yebhizinesi inobatika chishandiso chinoshanda chekuunza vatengi pamwechete kuti vatevedze chinangwa chakagovaniswa uchishandisa chigadzirwa chako.
Boka rakapfava renharaunda - mungave muchigadzirwa kana pasocial media - rinogona kuenda kure kure kubatanidza vashandisi nemibvunzo, mhinduro, uye kunyangwe maworkaround ezvimwe zvigadzirwa zvechigadzirwa. Inopa bi-value kune vatengi - mukana wetiweki uye kusangana nevanogona vatengi kana vadyidzani.
Kupfuura nharaunda yebhizinesi inobatika, kune dzimwe nzira dzekuvaka nharaunda ethos yakatenderedza brand yako…
Isa vatengi vako sevatungamiriri vanofunga vane-zvinogadzirwa nemushandisi.
Tangisa brand ambassador kana chirongwa chemumwe wako kukurudzira evhangeri yemhando.
Zviitiko zvepamhepo uye zvisingaite zvinobatsira vatengi network zvakanyanya.
Kukurukurirana kwakanaka ibhizimisi rinokosha. Zvichakadaro, nharaunda yebhizinesi inopa bi-bhenefiti yekunyoreswa kwemutengi kuchigadzirwa chako. Ndicho chimwe chikonzero chekuda bhizinesi rako uye chigadzirwa.
Mutengi Anobudirira Mbiru 4: Kugadzirisa
Kukurukurirana pakati pezvikwata zvebhizinesi rako ndiyo mbiru yekupedzisira yeMutengi Kubudirira pantheon. Kunyanya, Kubudirira Kwemutengi kunoda kurongeka kweChigadzirwa, Kushambadzira, uye Kutengesa zvikwata.
Nepo zvakakosha kuti dhipatimendi rega rega rive nezvinangwa zvega zvekuzadzisa, zvese izvo zvinangwa zvinofanirwa kuwedzera kune yakagovaniswa bhizinesi chinangwa. Alignment ndiyo nzira yekumisikidza kunzwisisa kwakafanana kubatsira kubatana kurinani kune izvo zvinangwa zvakagovaniswa.
Kana vakagovana zvinangwa, kugovana zvabuda, uye kugovana mabasa, pakupedzisira vanozogovana budiriro.
Tekinoroji yakagovaniswa ndiyo musimboti wekurongeka kwechikwata kunoshanda
Pamusoro pazvose, kurongeka kunoda maturusi ari munzvimbo ayo vashandi vanogona kugovana uye kutaurirana kune akasiyana.
Sezvandinotaura, misika yeSaaS iri kukura. Sezvo nyika yakaenda kure muna 2020, maturusi aya ave kuwanikwa zvakanyanya, uye akawedzera mune zvavanogona kuita.
CRM tekinoroji inoenda kure kure kune kubatanidza zvikwata. Nekuunza ese bhizinesi data pasi peiyo CRM amburera, mabhizinesi anogona kuishandisa kuenzanisa uye otomatiki maitiro, taurirana kune mumwe nemumwe zvine chekuita neakananga mapoinzi edata, isa mabasa ane chekuita nemarekodhi ega, uye taura, gamify, uye fungidzira metric nezvinangwa mukati medhibhodhi rimwe chete.
Normalised, nguva dzose kutaurirana pakati pezvikwata kuvhara mhinduro looops
Itai kuti zvikwata zvekutengesa nekutengesa zvisangane kamwe pasvondo kuti vamhanye nezvavakaita svondo rapfuura. Rondedzera zvinangwa zvakagoverwa zvakazadzikiswa uye izvo zvinofanirwa kuzadzikiswa mune inotevera. Bata pamwe uye ugovane hunyanzvi pamaakaunti emutengi wega wega kuti ukunde chero angangovharisa nzira pakunyoresa kwavo zvakare.
Saizvozvo, zvikwata zvezvigadzirwa zvinofanirwa kubata vhiki nevhiki demo kuti vagadzirise kufambira mberi kwavo munguva chaiyo, zvichipa Mutengi Kubudirira reps mukana wekuinyudza mukufona kwavo kwekuyedza nevatengi.
Gadzira yemukati mhinduro dzemakamuri ekutaura uko Vamiriri veBudiriro vanogona kutumira chero tsikidzi kana kurudziro kubva kune vatengi uye Chigadzirwa chinogona kubva varongera ivo mune yavo chigadzirwa roadmap. Mhinduro dzakavharwa dzakakosha pakubudirira kweMutengi. Chimiro chavo chinoda maoko kubva kuchikwata chimwe nechimwe.
Kutengesa kana Kubudirira Kwemutengi kunonzwisisa vatengi zvizere, uye inowana izvo vatengi vanoda uye vanoda kubva kuchigadzirwa. Vanotaura kune vatengi vanopa mhinduro.
Kushambadzira kunogadzira izvo zvirimo kuratidza uye kudzidzisa nezve kuita kwemhinduro. Kana chero chinhu chakakura zvakakwana chichichinja, saka chingangoda danidziro yayo.
Chigadzirwa chikwata chinoshandisa shanduko idzodzo, nekuvhara muviri mhinduro.
Kurongeka kwechikwata kunobatsira kuvhara mhinduro nekukurumidza, zvichireva kuti mutengi anowana chaizvo zvaanoda uye zvaanoda kubva kuchigadzirwa.
Vanoti hazviperi kusvika mukadzi mukobvu azoimba.
Zvakanaka, nyaya ndeyekuti, arasa inzwi rake. Rwendo rwemutengi haruna kupera kusvika watadza.
(Mutengi) Kubudirira kunopesana nekukundikana.
Tags: CRMmhinduro yemutengimutengi wehutano hwehukamahukama hwevatengikuongorora kwevatengimutengi kubudiriramutengi kubudirira nziramabhuku ekubatsirachizivo chezivokukwiraproactive customer serviceqna zvikamudzoka pakudyaraKugonesa Kugonesakutengesa-vanokwanisa vanotungamiravhidhiyo tutorialsWebinars
George ndiye Chinyorwa CheMukati Chekutungamira pa NetHunt CRM. Kunyora ndicho chinhu chake. Iye anovhenekera tarisiro pane tech uye B2B maindasitiri, achifukidza huwandu hwenyaya dzezvinyorwa kubva mukugadzirwa kusvika kumatengesi ekutengesa uye hukama hwevatengi. Anovhara musiyano uripo pakati pe data uye zvemukati zvekugadzira zvine flare.
Chii chinonzi Exit Intent? Inoshandiswa Sei Kuvandudza Shanduko Matengo?